Finikoudes သဲသောင်ပြင်, Finikoudes သဲသောင်ပြင် - Larnaca
ဥရောပ ဆိုက်ပရပ်စ် Larnaca
တည်နေရာ: Larnaca Promenade, Larnaca
အရှည်: 500 မီတာ
width: 30 100 မီတာ
ဆိုက်ပရပ်စ် - နေရောင်၏မိတ်ဆွေတို့ကို, ဖြည်းဖြည်းများအတွက်ပရဒိသု စိတ်ပြေလျော့သွား နှင့်ကောင်းမွန်သော ကမ်းခြေ အမှန်ပင်ဖြစ်ကြသော။ ဤအချိန်ကျနော်တို့သူတို့ထဲကတဦးတည်းအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ တည်ရှိသော Finikoudes ကမ်းခြေ, ဒါမှမဟုတ် Finikoudes သဲသောင်ပြင်, Larnaca အဓိကလမ်းအနီး။ သူကဆိုက်ပရပ်စ်မှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေတစ်ဦးစဉ်းစားသည်။ စာသားအရ "Phinikoudes" "နည်းနည်းသစ်ပင်များ" ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအပင်ကိုတစ်ကြိမ်ဤနေရာတွင်ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အမှန်တရားခဲ့ကြသည်။ သာယခုဤလေးတွေကြီးမားတဲ့ညားသစ်ပင်များဖြစ်လာကြပါပြီ။
ကမ်းခြေတစ် grayish ဒဏ်ငွေသဲနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ Finikudes အရှည်ရဲ့ width ကို 30 မှ 100 မီတာကနေအကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားလောက်မီတာ 500 ဖြစ်ပါတယ်။ ငှားနိုင်သည့်အိမ်သာ, ရေချိုးခန်း, အခန်းပေါင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နေရောင်ကုတင်, ကွန်ဂရက်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်ကအဘို့အအာကာသ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ,: ဒါဟာတစ်ဦးအဆင်ပြေနေဘို့လိုအပ်အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ ဒါဟာယာဉ်ရပ်နားအာကာသလည်းမရှိကိုလည်းကမ်းခြေနီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သမုဒ္ဒရာရေစင်ကြယ်၏။ အဆိုပါအားနည်းချက်ကြောင့်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ် ဟိုတယ်များ နှင့်ကမ်းခြေလမ်းခွဲခြား။
ကမ်းခြေ Phinikoudes အနီးရှိတိုက်ခန်း
ကမ်းခြေအနီးအများအပြားဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ဥပမာ, Sun ကခန်းမသဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်တိုက်ခန်းပါဝင်သည်။ ဒါဟာမီးဖိုချောင်နှင့်လေအေးပေးစက်နဲ့ suite ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်များ၏နယ်မြေတစ်ခုလုံးတွင် Wi-Fi ကိုရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေကနေတစ်ဦးကမီတာ 100 နှစ်ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ် Livadhiotis စီးတီးဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းလေအေးပေးစက်, တီဗီ, လုံခြုံ, ironing အဆောက်အရှိသည်, မသန်စွမ်းလူများအတွက်အထူးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းရှိပါသည်။ အနည်းငယ်ထပ်မံသုံးကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်Lokàlဟိုတယ်တည်ရှိသော XIX ရာစုအဆောက်အဦး၌။ အားလုံးအိပ်ရာရှိမွေ့ယာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးကိုအထူးကိရိယာကို အသုံးပြု. အဝေးမှမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကမ်းခြေဗဟိုလမ်းများတလျှောက်တွင်တည်ရှိပြီး Larnaca ၏ အပေါငျးတို့သဖွငျ့ကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းသော အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ။ ဒီကနေသင်တို့ကိုခြေလျင်ကမ်းခြေလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။
Velika Planina တောင်ကြီးတောင်ငယ်
လက်ပေါ် Baubles တုပ်နှောင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖျင် stack နည်းပညာ
Multivarka အတွက် Mackerel - ကွဲပြားခြားနားသောငါးဟင်းလျာများ၏အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
Thrombocytopenia - လက္ခဏာများ
Blender မှ Whisk
ဆောငျးရာသီ Raspberry များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
3 အရှိဆုံးစံပြဇနီး၏ birthstone
Endometrial polyps ၏ဖယ်ရှားရေး - စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ